Of ukopha abesifazane
Nyanga zonke kusukela kwabaneminyaka engamashumi 11-15 futhi eminyakeni 45-50, yokuqedela, izinguquko isigaba zenzeka emzimbeni womuntu wesifazane ukuthi wabonakaliswa kokuya esikhathini - ukugeleza kwegazi kusukela ipheshana zangasese. Ngokuvamile, ukukhululwa kwaqhubeka izinsuku 3-7 futhi kwenzeke ngezikhawu izinsuku 21-35 of. Zonke ukopha kulokhu cishe 80 ml. Izinguquko emzimbeni aqala ukufika zokwehlukaniswa, ngokuthi umjikelezo wokuya esikhathini. Uma owesifazane ekhulelwe noma ukuncelisa ibele, esikhathini ingekho.
Kukhona amacala lapho eseqala ukuya esikhathini kuyaphazamiseka. Menses babe okungajwayelekile, ubuhlungu, luningi noma ayindlala. Inani ukopha kungenzeka ngaphambi kokuya esikhathini, ngemva kwabo, kanye kwaphakathi umjikelezo. Ukuze kutholakale imbangela yokushona komgomo ezinjalo kumelwe iqondiswe wezifo zabesifazane kanye endocrinology, abayoba sihlaziye isimo, futhi uma kudingeka, aqoke nokwelashwa.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu ukopha
Ngokuvamile, inani ukopha zenzeka izifo ezifana nezimo:
ngesikhathi submucosal ungqimba we myoma kwesibeletho
Menses kakhulu, eside, ephelezelwa cramping ubuhlungu emuva aphansi futhi ngaphezu pubis.
Hyperplasia futhi endometrial polyp
Kukhona obuningi, kwesinye isikhathi amahlule ubuhlungu. Ngokuvamile, zikhona ezinjalo ukopha phakathi umjikelezo, futhi zife.
La amalanga ambalwa ngaphambi kokuya esikhathini noma ngemva kwalo kuvele zokubona esithweni sangasese. Ukuba khona lesi sifo ngokuvamile ihambisana kukhululwa ubufakazi amahlule esikhathini okubuhlungu.
nge ovulatory syndrome
Ubuhlungu besisu futhi ukubeka amabala ukopha avele phakathi umjikelezo, lapho nge-ovulation isigaba kwenzeka.
e ukuhlukumezeka umthondo
Kwenzeka igebe lwesitho sangasese sowesifazane kanye commissure posterior, okuyinto izimbangela ukopha. Isibonelo lokho kulimala kungenziwa ophoqelelwe noma deflowering eziphikelelayo. Ngezinye izikhathi ukwelashwa kudinga ngosizo udokotela ohlinzayo.
enezinkinga lesizalo ukopha
Ukuya esikhathini kwenzeka ngemuva kokulibaziseka eside futhi esibonakala ngokuqina kakhulu osenyameni kobuhlungu, okungase ubunjalo ukopha. Ngesikhathi esifanayo ngenxa ukulahlekelwa igazi anaemia okulandelayo impilo yakhe ewohlokayo abesifazane.
ngesikhathi sesigaba luteal ukuntula menstrualnogotsikla
La amalanga ambalwa ngaphambi kokuya esikhathini avele olunegazi osenyameni amnyama obomvu umbala. Isizathu salokhu - ukuntuleka ekukhiqizweni kwama-hormone engaphelele ezimise ophuzi umzimba wesibeletho. Leso simo kungaba liphindwe njalo, futhi kungase kube icala ekhishwe inyumbazane.
e yomdlavuza wesibeletho endometrial
osenyameni kwesitho sangasese akulona okuhlobene the menstrual cycle izigaba futhi kungenzeka okujula obuhlukahlukene.
Igazi ngokwahlukana ukuvela ngemuva ngocansi, sekuhloliwe izifo zabesifazane usebenzisa izibuko kanye ukuqunjelwa.
Ukuya esikhathini ngokuvamile eside, ephelezelwa osenyameni olunegazi phakathi nowe kokuya esikhathini.
Zokubona ngesikhathi sokukhulelwa
sokukhulelwa Jwayelekile. Ukwabiwa lolu hlobo zivamise ukwenzeka lapho wesibeletho umzimba ophuzi ukhiqiza progesterone ngokwanele - hormone eyinhloko sokukhulelwa. Ukwabiwa kuhlangene ubuhlungu emuva aphansi nesisu cramping noma uhlamvu edonsa. Lesi simo ukhuluma mayelana usongo ukukhipha izisu, futhi uma iyekwa ingelashwa kungaholela isisu nokuguqulwa. Ukopha ezingadingekile esibelethweni kungenzeka futhi abruption esinomhlapho.
ukhulela ethunjini. Omunye izibonakaliso ukhulela ethunjini kungaba eziphikelelayo opha izitho zangasese.
Ukuxilongwa mibandela esekelwe imiphumela yocwaningo udokotela - udokotela wezifo zabesifazane, idatha ultrasound kanye imiphumela yegazi ku human chorionic gonadotropin.
Ukuze noma yiziphi izinguquko emzimbeni ngesikhathi sokukhulelwa kufanele aphathwe ngokucophelela, ikakhulukazi uma kuziwa osenyameni lwesitho sangasese sowesifazane. Esimeni iyiphi osenyameni engavamile, kubalulekile, ngaphandle kokuba izinga ukwethuka, ukubona udokotela wezifo zabesifazane, nokuziphatha ultrasonic ukuhlolwa emizimbeni ka indishi encane.
Ukuhluleka kwama-hormone kwabesifazane: imithi izidakamizwa. Izimbangela ukungalingani
Tale of Pinocchio, noma indlela yokunciphisa ekhaleni.
Asymmetry Namandla kwebele: okunokwenzeka izimbangela, izimpawu, ukuxilongwa kanye nokwelashwa izici
Ukuthuthukiswa kwengane: izigaba eziyinhloko
Ngokuthakazelisayo, futhi yini uyaphupha kitten?
Umbala Beige elingaphakathi: zakudala futhi Finesse
Abelia grandiflora: incazelo kanye nemithetho yokunakekelwa
Babashayeli for "Android": ukubuyekeza izinhlelo umhlabeleli
Kungani ephusheni egaqa amazinyo
Gianni Rodari - lowo wabhala "Chipollino"
Ukungawazi umthetho asikho isizathu esamukelekayo. Kuyini we umthwalo ukwephula umthetho?
Linikeza neseluleko esisebenzayo sendlela ukuqeda izinyendle imvukuzane endaweni engadini
Izifunda zokuphatha (Kharkov): Dzerzhinsky, Ordzhonikidzevsky, eMoscow
Inkinga ukuthi ukuze alulame amafayela asusiwe kusukela indawo ye-USB, adideke noma abasebenzisi professional